MOETHIHAAUNG: ကား အတွင်းခန်းထဲမှ အဆိပ်ငွေ့ထွက်ရှိ
နေပူပူထဲမှာ ကားရပ်ခဲ့ ပြီဆိုရင် ကားပေါ်ပြန် ရောက်ရောက်ချင်း ပြတင်းပေါက်တွေ အကုန်ဖွင့်ပြီး ခဏ အကြာမှ လေအေးပေးစက်ကို ဖွင့်သင့်ပါတယ်…
အကြောင်းအရင်းကတော့ ကားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပလတ်စတစ် အစိတ်အပိုင်း တွေကနေ အရမ်းပူပြီး Benzene ဘန်ဇင်း ဆိုတဲ့ ကင်စာဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်ငွေတွေ ထွက်လာတာ ကြောင့်ပါ... ရှုမိရင် ပထမအဆင့်အနေနဲ့ အဆုပ်နဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေး နိုင်ပါတယ်.. ဒီအဆိပ်ငွေ့ ကို ခန္တာကိုယ်က လွယ်လွယ် နဲ့ မတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး…ဘန်ဇင်း ကြောင့် ကင်စာရောဂါ၊ သွေးဖြူအု နည်းရောဂါ တွေဖြစ်နိုင်ပြီး ခဏခဏ ရှုမိရင် သွေးကင်စာ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတဲ့ အထိဆိုးရွား နိုင်ပါတယ်…
အန္တာရယ်မရှိ နိုင်တဲ့ဘန်ဇင်း ပမာဏက စတုရန်း ၁ ပေကို ၅၀ မီလီဂရမ် ရှိတယ်… ပုံမှန် နေအေးထဲက ကားတောင် ၄၀၀ ကနေ ၈၀၀ မီလီဂရမ်ထိရှိနေပြီ. . နေပူထဲရပ်ခဲ့တဲ့ ကားထဲဆိုရင် ၂၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀ မီလီဂရမ်ထိရောက်နိုင်တယ်လေ.. အဲတော့ လက်ခံနိုင်တာထက် အဆ ၁၀၀ နီးပါးများနေတာပေါ့ . . .
ဒီတော့ နေပူပူ နေအေးအေး ကားထဲဝင်ထိုင် လိုက်တိုင်း မှန်အကုန်ချပြီး လေသန့်သန့် အရင်ပေးဝင် လိုက်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ် တဲ့အကျင့်တခု ကိုလေ့ကျင့်ပေး နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး MoeZac Auto က ဒီ ပိုစ့်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …
(မှတ်ချက်။ ။ ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ. ကိုယ်တိုင်ခြင့်ချိန်ကြည့်ကြပါ)
Posted From MoeZac Auto
Posted by Myo Lwin Aung at 4:39 AM